Osimiri kacha mma na Mallorca | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Palma de Mallorca, Osimiri
Mallorca bụ agwaetiti nke nwere ike ịnya isi na ịnwe ịtụnanya osimiri mara mma kristal. Nke a bụ kpọmkwem ihe ndị na-aga ezumike n'àgwàetiti ahụ na-achọ kachasị, na-adọrọ mmasị na foto niile nke coves na nkume dị mma na mmiri doro anya.
Iji nweta echiche banyere nkuku niile anyị nwere ike ịchọpụta, anyị ga-ahapụ gị ndepụta na osimiri kacha mma na Mallorca, ụfọdụ ndị a maara nke ọma na ndị na-arụsi ọrụ ike na ndị ọzọ na-ejighị ndị njem nleta. Ọ bụrụ na ị hụrụ oke osimiri n'anya na mmiri mara mma kristal, ị ga-achọ ịgagharị agwaetiti niile iji chọpụta nke ọ bụla n'ụsọ mmiri a.
2 Cala Varques, Manacor
3 Caló des Moro, Santanyi
4 Cala Mondragó, Santanyi
5 Formentor osimiri, Pollença
8 Cala Es Caragol, Santanyi
10 Cala Es Mármols, Arta
11 Cala Agulla na Cala Ratjada, Capdepera
13 Osimiri Palma
Anyị na-amalite na otu n'ime osimiri kachasị mma na Mallorca. Obere aja a juru aja di n’agbata onu okwute abuo di narị abuo, nke mere ka odighi ebe a na apughi imeri. Ọ dị na Sierra de la Tramontana ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga njem, ị nwere ike ịme ụzọ ụfọdụ na-adọrọ mmasị na mpaghara ahụ.
Cala Varqués na-bụ onye a maara nke ọma ebe ndi hippies nke oge ahu gara. Ọ nwere ọtụtụ ọgba ndị sitere n'okike ma taa ọ ka bụ ebe amaara ama, ọ bụ ezie na ọ naghị adị mfe ịnweta, nke pụtara na ọ naghị ejupụta dị ka ndị ọzọ. Nwekwara ike ịnụ ụtọ ụdị okike nke okwute mere.
Caló des Moro, Santanyi
Nke a osimiri mara mma E jiri ya tụnyere ọdọ mmiri, ma mgbe ị ruru ya, ọ bụ ihe ọ dị ka ọ dị. Na anyị na-eche ọdọ mmiri ọdọ mmiri nwere oke mmiri kristal doro anya dị n'etiti mgbidi nkume abụọ. Ọ nwere ike ịdị ka ebe kachasị mma ịkwụpụ, mana anyị ga-ekwusi ike na n'etiti ọnwa Ọgọst a, ebe a, ebe mpaghara ya dị ntakịrị, juputara na ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ịga n'oge dị ala, gbaa mbọ hụ na ị gara ya.
Nta-a bẹ bụ mma ebe, nke na-enweghị mmetụta ahụ nke jupụtara na ọnwa okpomọkụ, na na enweghị obi abụọ ọ bụ ebe dị mkpa. Ọ nwere mmiri doro anya na obere omimi, dị mma maka ezinụlọ.
Formentor osimiri, Pollença
Osimiri dị warara nke nwere ọtụtụ ọrụ, ebe ọ bụ na mpaghara ndị njem. Ọ nwere doro anya na mmiri na oké echiche nke Pollença n'ọnụ mmiri. Osisi pine gbara ya gburugburu ka o nwee obi uto na ebe izu ike izu ike. Ọ dị mfe iji ụgbọ mmiri si Pollença ma ọ bụ ụgbọ ala rute ebe ahụ, nwee ọdịdị mara mma iji chọpụta.
Es Trenc osimiri dị na Obodo Campos ma ọ bụ nnukwu aja ebe na-emepebeghị, ma n’ihi nke a ọ bara nnukwu uru. O nwekwara otutu ikuku n'abali okpomoku. Ebe nwere mmiri doro anya kristal mara nke ọma.
Obere osimiri a dị ezigbo iche. Y’oburu na ichoro Mallorca kachasi nma, igaghi agha agha ya. N'ezie, ị ga - eche ihu n'ụsọ osimiri na - enweghị ájá, yabụ na ọ bụghị ụdị osimiri. On a osimiri ị ga-ahụ hlọ ndị ọkụ azụ̀, ebe ị ga-esi asa ahụ, na ebe okwute okwute ị nwere ike isi banye na mmiri.
Cala Es Caragol, Santanyi
Thehapụ ụgbọ ala na mmata Eslọ ọkụ Ses Salines ị nwere ike ịbanye n'ụsọ osimiri a, nke bụ akụkụ ndịda ndịda na Mallorca. Ọ bụ obere osimiri, mana ihe dị mma bụ na ị ga-ejegharị ihe dị ka nkeji iri abụọ site na ụfọdụ ebe mara mma iji rute ya, yabụ anaghị etinyekarị ya. Otu n'ime ihe ndị ahụ dị oke mkpa ịchọta ma site na nke ị nwere ike ime mgbalị ahụ, ọkachasị maka ịdị jụụ ya.
Nke a Ọkara Cove Ọ dị na Felanitx ma nwee mpaghara nkume na ahịhịa na nnukwu ogige n'akụkụ nke ọzọ. Anyị na-aga n'ihu n'ihu ebe mara mma mmiri mara mma. Na gburugburu enwere ụfọdụ nnukwu ugwu dị iche iche na-ele anya n'ụsọ osimiri Mallorca, na-eme ka ọ dị mma maka ụbọchị ezinụlọ, yana ije, picnic na bat gụnyere.
Cala Es Mármols, Arta
Getbanye ebe a adịghị mfe, mana nke ahụ na-ekwe nkwa na anaghị atụkọta ya n'oge ọkọchị. Ma ị nwere ike ibata ụgbọ mmiri ma ọ bụ ịnwere ike jiri ụkwụ gawa, site n'oké okwute. Ka o sina dị, ihe ga-esi na ya pụta bara uru, jiri paradisiacal cove na mmiri transperent.
Cala Agulla na Cala Ratjada, Capdepera
Na mpaghara Capdepera anyị hụrụ ụfọdụ ezigbo coves. Cala Agulla bụ osimiri mara mma n'etiti osisi pine na ugwu, nke dị nso Cala Ratjada. Mpaghara njem nleta ma nke nwere otutu nhọrọ mgbe ị na-asa ahụ na ịsa ahụ.
Osimiri a mara mma sara mbara ma nweekwa ụdị ọrụ niile, ịbụ ebe na-ekwo ekwo n’ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti ahụ. Ọ dị nso na Cala Ratjada.
Nke a nwere ike ọ gaghị abụ nke kachasị mma, mana ọ bụ otu osimiri dị mkpa n’ihi ịdị nso ya na obodo Palma. Dị nnọọ ukwuu ma nwee ụdị ọrụ dị iche iche, mana ọ na-arụsi ọrụ ike n'oge ọkọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Osimiri » Osimiri kacha mma na Mallorca